Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » COVID-19 na-agbanwe omume njem ndị Italiantali
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Rail njem • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na -ebu amụma ụgbọ njem ọha ga -agbada ruo pasent 22.6 mgbe ezumike ezumike.
Ihe karịrị 50% nke ndị na-eme atụmatụ ịgbanwe akparamagwa njem ha kwupụtara oria ojoo COVID-19 dị ka isi ihe kpatara ya
Ojiji ka ukwuu n'ịrụ ọrụ na mmụta dịpụrụ adịpụ na -egosi mgbanwe n'omume njem.
Ozi ọhụrụ na -abịa n'agbanyeghị ọganihu mgbasa ozi ịgba ọgwụ mgbochi ụlọ nke Italytali.
Pasent 64.66 nke ndị mmadụ (ma ọ bụ nde mmadụ 34.9) nọ na Italy gbara ọgwụ mgbochi ọrịa nke ọma ruo ụbọchị Wenezde.
Nke Italy Ụlọ ọrụ National Institute of Statistics (ISTAT) weputara akụkọ taa, na -egosi na Oria ojoo COVID-19 ga -aga n'ihu na -emetụta usoro ngagharị nke ndị ọrụ Italiantali na ụmụ akwụkwọ ruo ọnwa ndị na -abịa.
"Ojiji ka ukwuu n'ịrụ ọrụ na mmụta dịpụrụ adịpụ na -egosi mgbanwe n'omume njem nke ndị ọrụ na ụmụ akwụkwọ," ISTAT dere n'akwụkwọ akụkọ ya.
"Ọ bụ ezie na ihe karịrị pasent 80 na -agbagharị ma ọ dịkarịa ala ugboro ise n'izu tupu oria ojoo a, ihe na -erughị pasent 70 na -eme atụmatụ ime otu ugboro ugboro ọzọ."
N'ime ndị ọrụ na ụmụ akwụkwọ sonyere n'ọmụmụ ihe ahụ, ihe karịrị pasent 50 nke ndị na -eme atụmatụ ịgbanwe omume ngagharị ha zoro aka na mberede coronavirus dị ka isi ihe kpatara ya.
ISTAT bukwara amụma mgbanwe n'omume njem, ebe ọnụọgụ ndị mmadụ na -ebu amụma ụgbọ njem ọha ga -agbada ruo pasent 22.6 mgbe ezumike ọkọchị, ma e jiri ya tụnyere pasent 27.3 tupu ọrịa ọjọọ.
Ihe data a bịara n'agbanyeghị ọganihu mgbasa ozi ịgba ọgwụ mgbochi ụlọ nke Italytali, nke hụgoro pasent 64.66 nke ọnụ ọgụgụ ndị Italy (ma ọ bụ nde mmadụ 34.9) zuru oke ogwu ruo ụbọchị Wenezde.
Ọrịa ọjọọ a ga -ebelatakwa oge njem maka ọrụ na ọmụmụ ihe, dịka ụlọ ọrụ ọnụ ọgụgụ si kwuo.
Emere ọmụmụ a dịka akụkụ nke nyocha ntụkwasị obi ndị ahịa nke ISTAT na July na nlele nke ihe ruru ụmụ amaala 2,000 gbara afọ 18 ma ọ bụ karịa.
Ọhụrụ Virus nro? WTN na-akpọ oku maka ịgba ọgwụ mgbochi ụwa…
Southwest Airlines agaghị achụ ndị ọrụ ya ...
Qatar Airways na-eweghachite A380s maka oyi…
Ọ bụ Nnụnụ… Ọ bụ ụgbọ elu…….
Singapore na India nwetara nkwekọrịta ọhụrụ na ụgbọ elu
Mmanya bara ọgaranya Italy Ọ dịghị ihe ọhụrụ: mkpụrụ vaịn Go nwaafo
Mgbọ gbara na ọdụ ụgbọ elu Atlanta International
China na-akwụ ụgwọ ego maka ịkọ akụkọ COVID-19 ọhụrụ…
Ọnwụ COVID-10 nke Russia na Septemba ji okpukpu abụọ karịa…
Nkwụsị obodo nwere ike kwụọ ụgwọ mkpirisi na...
Ọbịbịa ndị ọbịa na mmefu ego agbadala na Hawaii...